Nrụpụta ihe nkiri enyo enyo China PET Reflective Mirror PET. Ceres
Ọmarịcha mkpuchi ọkụ na mmetụta ntụgharị dị mma, nwere ike dochie foil aluminom;
Ọ nwere ikike ntụgharị uche dị mma na ultraviolet na infrared;
E jiri ya tụnyere ngwaahịa na-atụgharị uche nke ngwaahịa igwe anaghị agba nchara na ngwaahịa aluminom, oriọna ndị ahụ nwere ntụgharị ọkụ dị elu ma dịkwa ọnụ ahịa.
Oriọna igbe na -atụgharị uche, ntụpọ ọrụ ugbo, ịchọ mma, ntụgharị enyo, ihe nkiri aluminom ụtaba, wdg.
Enyo enyo na -erite ọtụtụ ihe ubi n'ubi. Ọ na-ebelata mmebi ụmụ ahụhụ na ọrịa na tomato ma na-egbu oge mmalite nke ọrịa na-ebute aphid na skwọsh, egusi, kukumba na ọka ruo mgbe osisi na mkpụrụ osisi tozuru oke ma yikarịghị ka ọ ga-emebi nke ukwuu.
Ose, eyịm na poteto niile amụbawo mkpụrụ na nnukwu mkpụrụ mgbe a kụrụ ihe nkiri mulch mulch, n'agbanyeghị na ọ nwere ike belata mmepụta nduku na obere okpomọkụ. Osisi oroma na -eritekwa uru site na mbenata mmebi nke ụmụ ahụhụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ihe nkiri enyo gbara ya gburugburu. Mkpụrụ osisi tomato na -eto eto - ụbọchị ise ruo ụbọchị asaa - nwere ike nweta akwụkwọ ọkụ na nkụda mmụọ nwa oge mgbe a kụrụ ya na enyo enyo, mana mmebi adịghị njọ, osisi ndị mebiri emebi ga -akakwa nke na -akụghị na ahịhịa. Otú ọ dị, eggplant adịghị akwado maka ihe nkiri enyo
Ihe akaebe na -enwu ọkụ na 98% na -atụgharị uche
Na -adịgide adịgide, mgbapu mmiri na -eguzogide ọgwụ
PET kpuchie maka nchekwa
Rolls nwere ike ahaziri
Ọkpụrụkpụ: 12 mic wdg
Obosara: ≤2100 mm
Isi akwụkwọ: 3 ”76 mm (3 ″) 、 6” 152 mm
Esemokwu nke ọnụọgụ
Nha nke oyi akwa aluminized
Mgbakwunye nke oyi akwa a na -eme ka ọ pụta ìhè (mpaghara ebe alumiun dị iche na -egosi)
Wetting erughị ala nke Aluminium oyi akwa
Aluminized oyi akwa eguzogide
Mmiri nnyefe upo mmiri
Ọnụ ọgụgụ ikuku oxygen
Nke gara aga: Ihe nkiri dị oke egwu
Osote: Ihe Nkiri Silver Mulch Silver
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Ngwaahịa niile